Asizilungiselele ukuzivikela kwizikhukhula ngokuzayo, kuloba uNtokozo Biyela - Umbele I SMME Profiles I Labour I Economics I Agriculture I Executive Interviews I Personal Finance News
Lena yinhlekele engakaze ibonakale eKZN, ngisho ezweni imbala. Ngithanda ukudlulisa amazwi enduduzo kubo bonke abalahlekelwe nabasemanzini ngalesi sikhathi. Ngithi nje kinina nonke duduzekani, sengathi uNkulunkulu angaba nani kuze kube sekupheleni. Nabangakazitholi izihlobo zabo ezidukile siyabakhulekisa. Sengathi bangazithola inyama isahlangene nomphefumulo.
Angazi ngizoqala ngikhulume ngani ngoba kuningi okufanele sikubheke ngalesi simo esisehlele eKZN. Uma uzoqaphelisisa uzobona ukuthi akukona okokuqala ukuthi siyisifundazwe sizithole sisesimweni sezikhukhula. Uma uqaphela uzobona ukuthi empeleni njalo emva kweminyaka emibili isifundazwe sivamise ukuhaqwa yizikhukhula ezithi azifane nezisihlasele ngesonto elidlule. Pho yini eyenza singakwazi ukubona ukuthi le nto iloku iphindaphinda futhi kumele siyisukumele?
Ukuhlela ebhizinisini kubaluleke ngendlela emangalisayo. Loku kusho ukuthi uhulumeni wesifundazwe noma umkhandlu waseThekwini kudala kwakufanele uthathe izinyathelo zokuhlolisisa ukuthi yini engenziwa kangcono ukuvikela ingqalasizinda namabhizinisi asanda kulimala ngenxa yezibhelu ezenzeke ngonyaka odlule.
Okubuhlungu wukuthi la mabhizinisi abesathi ayasimama ekucekelweni phansi kwanyakenye naku manje esebhekana nengwadla yezikhukhula. Kanti ngempela inqubekelaphambili yamabhizinisi amancane iyoke ibonakale yini? Bathi basabathe bayazitakula osomabhizinisi abancane ebunzimeni bokulahlekelwa izimpahla nobhubhane iCOVID-19, nazi izikhukhula.
Le nto isho ukuthi kwathina singosomabhizinisi kufanele sizibuze umbuzo othi yini engahle ingahambi ngendlela ebhizinisini lami, phecelezi i-risk assessment. Leyo nto iyokwenza ukuthi sibhekisise yonke into engaba nobungozi ebhizinisini. Singacabangi nje ukuthi into engaba yinkinga wukungenzi kwalo imali kuphela.
Sikhalisana kakhulu nosomabhizinisi basesifundazweni. Ningalahli ithemba, namanje asisukume sakhe.
Siyethemba nakuloku uhulumeni wezwe nowesifundazwe uzongenelela ukusiza amabhizinisi ehlelwe wumshophi wokulahlekelwa yizinsiza zebhizinisi. Kepha okubalulekile kunako konke kulesi sikhathi wukuthi sizame ukwenza amabhizinisi ethu akwazi ukubhekana nenhlekelele. Loku kusho ukuthi kufanele noma kanjani uma ibhizinisi lakho lingekho online, manje kuyaphoqa ukuthi wenze imizamo ukuthi nawe ubheke ukuthi ungalenza kanjani ukuthi libe yingxenye yamabhizinisi atholakala online, phecelezi i-digital transformation.
Asisihle isikhathi esiphila kusona. Siyasiphoqa ukuthi wonke umuntu owusomabhizinisi afunde i-crisis management, ukukhipha amanzi endlini. Kuyacaca ukuthi njengoba siqhubeka nempilo sisazovika ezinye futhi izimvula uma kuziwa emabhizinisini ethu.
Ngiyathemba futhi ukuthi uhulumeni wethu uzokwenza konke okusemandleni ukulungisa ingqalasizinda yesifundazwe ukuze kungathi eminyakeni emibili ezayo sizithole sibhekane nenkinga efanayo futhi.
Kithina esisindile ezikhukhuleni, aselule isandla sokusiza imiphakathi elahlekelwe. Sikhiphe noma yini esinayo esingakwazi ukusiza ngayo; kungaba yizimpahla, yizingubo, wukudla, yizitsha noma yimali.
Asibambaneni sitakulane kulolu sizi isizwe sethu esibhekene nalo. UNkulunkulu anibusise.